Kulanka Wadatashiga Xukuumada Iyo Hormuudka Odayaasha Deegaanka - Cakaara News
Kulanka Wadatashiga Xukuumada Iyo Hormuudka Odayaasha Deegaanka
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco, 5ta October 2016. Kulan ay wada yeesheen xukuumada DDSI iyo hormuudka odayaasha deegaanka ayaa galinkii danbe ee maanta kadhacay hoolka shirarka ee Kaali2.
Kulankan oo uu hogaaminayey madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliso madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah marwo Sucaad Axmed Faarax ayaa waxaa kasoo qaybgalay hormuudka odayaasha, garaadada, suldaamada iyo ugaasyada deegaanka.
Hadaba kulankan oo lagaga wadatashanayay sidii aan uga bixi lahayn saboolnimada islamarkaana diirada lagu saarayay xaalada guud ee dalka ayaa waxaa ugu horayn furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in si bulshada deegaanka looga saaro saboolnimada loo baahan yahay in odayaashu noqdaan kuwo shaqaysta oo aragti-shaqo leh islamarkaana jeebkooda wax kala soo baxa oo kabaxa nidaamka kutiirsanaanshaha jeebka qabiilka si qaybaha kale ee shacabku ugu daydaan. Si taa loo hiragaliyana laga rabo odayaasha deegaanka inay udiyaargaroobaan dhanka tabaca beeraha isagoo kubooriyay in odayaashu noqdaan Limaataawi suldaan, ugaas ama garaad balse aan loo baahnayn islamarkaana uusan isbadal keeni Karin oday mashaqayste ah oo si fadhiidnimada ah dadka gacanta u hoos dhigta. Wuxuuna intaa kudaray, in isbadal iman karo marka ay odayaashu yeeshaan aragti shaqo oo ay kamadhan tahay baryo iyo kago’naanshiinyo dhanka waxsoosaarka beeraha ah. Madaxwayne CMC ayaana carabka kudhuftay in jigjiga laga samayn doono beer tusaale iyo cashar wax laga barto unoqota beeraha kale iyo in nidaamka xoolo-dhaqatada si kusalaysan nidaamka casriga ah loo hagaajin doono islamarkaana odayaasha la isugu xidhayo nidaam iskaashato iyagoo laga caawin doono waxyaabo badan oo hada kadibna la iskula xisaabtami doono dhanka tabcashada beeraha.
Sidoo kale, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kahadlay xaalada guud ee dalka ayaa sheegay in dhargigii iyo xayle-salaase labadaba aynaan dhib mooyee wax dheef ah kuqabin balse aan nimcada horumarineed ee maanta aan kahelay nidaamka federalismka ah iyo dastuurka dalka isagoo ujeedada kadanbaysa rabshadaha deegaanada axmaarada iyo oromada kadhacay kutilmaamay mid larabo in wadanka lagu qaso oo ay kadanbeeyaan wuxuu kusheegay ‘barandha-adhaari’. Taas oo aan marnaba dhici Karin horayna looga gaashaantay oo uu dawo kayahay qodobka 39, aad ee dastuurka. Madaxwaynaha ayaana odayaasha iyo shacabwaynaha deegaankaba kubooriyay in hadii aan shalay ahayn meel itoobiya lagaga duulo aan maanta noqono deegaanka itoobiyaanimada isukeena.
Dhanka kalana hormuudka odayaasha deegaanka oo bogaadiyey fikirka saliimka ah ee madaxwaynaha islamarkaana kamahadceliyay ayaa sheegay inay diyaar uyihiin dhanka tabaca beeraha iyagoo cadeeyay in deegaankeena meel aan labeeran Karin aysan jirin oo hadii ay udhaqaaqaana ay waxtar badan kakeeni doonaan. Waxayna balanqaadeen inay hoos u dhaadhicin doonaan wacyigalin balaadhan oo dhanka tabaca beeraha ah iyagoo beerashada iyagu bilaabi doona. Sidoo kale, odayaasha ayaa cambaareeyay falalka ururada nabad-diidka ah ee Onag, Ginboot7, Alqushaash, Ubbo IWM ay kurabaan inay wadanka dib ugu soo celiyaan nidaamyadii cabudhiska iyo cadaadiska kudhisnaa ee dhargiga iyo xayle-salaase iyagoo kutilmaamay inay hadhkoo cad riyoonayaan oo aysan marnaba usuurtagalaynin. Waxayna kudueeyeen in ilaahay roob khayr qaba uu bulshada iyo deegaankaba siiyo, unasii adkeeyo nabadgelyada iyo horumarka jira islamarkaana uu xukuumada DDSI, XDSHSI, hogaaminta iyo nidaamka maamulka suuban uxafido. Wixii cadaw ahna uu kaqabto.
Iskusoo wada duuboo, madaxwaynaha ayaa duco balaadhan oo dhinac walba ah kusoo xidhay kulankan isagoo odayaashana usheegay in mudada lakulanka odayaasha oo ahaan jirtay 2 jeer sanadkii laga dhigay 4 jeer iyadoo 2 jeer lalakulmi doono hormuudka odayaasha, 2 jeera kulanwaynihii caadiga ahaa.